Sidee baan ku xukumi karaa raadinta maxaliga ah ee SEO leh Google?
Xusuusnoow maalmo wanaagsan, markaad ku dhowdahay ganacsiga maxaliga ah ee ugu sarreeya ee Google-ka Goobta Search Engine Results (SERPs) ee loo isticmaalo in ay noqdaan gabal keega ah? Haa, si dhab ah, waxaynu kor u qaadi karnaa iyadoo aysan jirin xeelado casri ah oo sii kordhaya oo aan hadda ku qasbanahay inaan wax ka qabano. Inta badan milkiilayaasha ganacsatada intooda badani waxay awood u yeelan karaan inay jilaan goobahooda goobaha raadinta ee Google ee liiska natiijooyinka kaliya ka dib dhawr talaabo oo degdeg ah oo sahlan. Dhammaantood waxay u baahnaayeen inay joogaan dusha sare ee raadinta deegaanka waxay ahayd mid aan si fudud loo fududayn. Markaad heysato qaab dhismeed oo si wanaagsan loo dhisay, waxaad boggaga ku liisgareysey buugga Google, iyo sidoo kale dhowr lammaanayaal oo kale ah - talaabada ugu dambeysa ee lagu fulinayo ololahaaga sahlan ee raadinta deegaankaaga ayaa sheeganaya boggaaga loo yaqaan Google My Business. Qaabkaas, qof kasta wuxuu ku wareegi karaa rikoodhka sare ee codsi kasta oo shakhsi ah oo ka jawaabaya natiijooyinka maxalliga ah ee maxaliga ah ee loogu talagalay su'aalaha muhiimka ah ee maxaliga ah, tusaale ahaan, wax la mid ah "qandaraasleeyaha Texas. "
Maanta waa wax aad u niyad jabsan in sida sahlan oo sahlan ee raadinta deegaanka ee SEO oo ah mid aan caadi ahayn. Aynu wajahno - hadda waxaan la shaqeyneynaa jawi raadin deg deg ah oo weligeedba isbedelaya. Maxaan sameyn karnaa? Waxba ha isku dayin inaad la qabsatid xaqiiqadan cusub, taas oo u baahan in hadda la eego qayb kasta oo ka mid ah Search Engine Optimization, marka laga reebo horay loo soo sheegay ee raadinta deegaanka. Sidaa daraadeed, aan isku dayno in aan la qabsano sharciyada cusub oo aan ku dadaalno inaan ku guuleysano tartanka. Ugu horreyntii, waxaan soo jeedinayaa in la eego xaaladaha la isku badalay oo loo baahan yahay dareenka saxda ah ka hor inta aan wax kale jirin.
tartan adag oo maxalli ah
Looma baahna in la sheego sida ugu dhaqsiyaha badan ee u socdo dagaal dhab ah oo ka dhan suuqyada maxaliga ah. Xaaladda hadda jirta ma ahan inay la yaabto, sababta oo ah saamiga libaax ee ganacsatada internetka ayaa ogaanaya muhiimada ay leedahay raadinta gudaha SEO si ay u dhamaystirto aasaaska aasaasiga ah iyo in la sii wado hawlgal heer qaran, ama xitaa caalami ah.
Google My Business waa arrin, sida had iyo jeer
Haysashada awoodda asalka ah, Google My Business ayaa dhawaan la siiyay xoojinta xitaa xoogan. Liisaska rasmiga ah ee shirkadda raadinta maaha oo keliya miisaan culus, laakiin hadda waxay ku jirtaa wadashaqayn adag oo la leh liisaska liiska iyo xaashiyada kuwaas oo noqdey mid dhamaystiran oo wargelin ah. Hadda waxay rabaan in aad si joogto ah u shaqeyso si aad si taxadar leh u kormeero xogta aad ku liis garayso macluumaadkaaga, kaas oo ah in ay noqdaan kuwo midaysan sida ugu macquulsan, iyo sidoo kale si isku dheelitiran.
Ha illoobin inaad dib u eegto online badan
. Ma aha oo keliya sababtoo ah dib u eegista internetka ee wanaagsan ayaa muujinaya rajo aad u firfircoon oo lagu galo boggaaga kore ee darajooyinka sahaminta SEO-ga, laakiin sababtoo ah hal lambar qabow - dib u eegis wanaagsan ayaa lagu qiyaasay in ay gaarsiiso ilaa 22%. Dhammaan wixii ka dambeeya, dib u eegista internetka ayaa wali ah qalab xooggan oo lagu galo macaamiisha cusub ee suurtogalka ah ee ganacsigaaga, waxayna wali u adeegi karaan si fiican u horumarinta taageerayaashaaga hadda. Taasi waa sababta dib u eegista tayada internetka oo hadda xitaa u gaar ah, markaa waa inaadan weligaa haysanin dayacaad Source .